Fitsapana haingana ho an'ny sakafo sy ny varimbazaha - BALLYA
Ny olona dia mitandrina fatratra amin'ny sakafo amin'ny ankapobeny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, organika, maintso, tontolo iainana ary lafiny hafa. Ohatra, ny biby dia mihinana sakafo na tsia, na raha misy additives sns., Ny fiatraikany anatiny amin'ny fiarovana ara-tsakafo dia tsy dia jerena loatra, ary ny tsy fahampian'ny otrikaina dia tsy raharahain'ny antony ara-tontolo iainana.
Mycotoxins indraindray dia antsoina hoe mycotoxins, izay akora misy poizina amin'ny olona sy ny biby avy amin'ny bobongolo sasany ao anatin'ny toe-piainana sasany. Rehefa mihinana sakafo sy misakafo amin'ny mycotoxins ny olona sy ny biby, dia iharan'ny fanapoizinana, na fanapoizinana mycotoxin. Ny loharanom-pahalotoan'ny sakafo, ny menaka ary ny sakafon'ny mycotoxins dia:
Rehefa maniry any an-tsaha ny voly dia voaloto, toy ny scab;
Mandritra ny fotoam-pijinjana, ny voamaina, ny diloilo ary ny sakafo dia tsy maina amin'ny fotoany, ary voaloton'ny fiparitahan'ny bobongolo;
Ny sakafo sasany dia simban'ny orana mandritra ny fitaterana;
Mandritra ny fizotry ny fitehirizana, noho ny hafanana sy ny hamandoan'ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny rano be ao anaty voamaina dia mipoitra ny ahitra ary vokarina ny poizina.
Rehefa mihoatra ny rano azo antoka ny hamandoan'ny voamaina, menaka ary sakafo, raha mbola mety ny mari-pana sy ny hamandoana dia azo hamokarana poizina maro kokoa ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 5 andro, ary ny famokarana poizina dia mety hahatratra tampon'isa ao anatin'ny 7 ka hatramin'ny 10 andro.
Fitsapana fahanana BALLYA
The Fitsapana mycotoxin:
Fitsapana haingana Aflatoxin B1
Fitsapana haingana Vomitoxin
Fitsapana haingana Fumonisin
Fitsapana haingana T2
Fitsapana haingana Ochratoxin
Momba ny Feed & Grain
Fahanana sy voamaina
Ny karazan-tsakafo eto akaikiko dia mihalehibe ary manankarena, fa ny tena nampifandraisintsika dia ny serealy. Manankarena otrikaina ny voamadinika. Ny fihinanana serealy sasany isan'andro dia afaka miantoka ny filan'ny sakafo mahavelona ny olona.
Feed dia fehezan-teny ankapobeny amin'ny sakafon'ny biby notezain'ny olona rehetra. Amin'ny heviny tery kokoa, ny sakafon'ny ankapobeny dia manondro ny sakafon'ny biby miompy amin'ny fambolena na ny fiompiana. Ahitana soja, sakafo soja, katsaka, sakafon'ny trondro, asidra amine, sakafo isan-karazany, vovoka whey, tavy, hena ary hena taolana, serealy, additives feed, ary karazan-tsakafo fahana hafa.
Amin'ny alàlan'ny akora
1. Ny coarse feed (1-00-000) dia manondro kilasy famahanana miaraka amin'ny atin'ny fibres tsy manara-penitra mihoatra ny 18% amin'ny zavatra maina, indrindra ao anatin'izany ny ahitra, mololo, vokatra fambolena sy sisin-tany, ary dreg miaraka amin'ny atiny maro hafa mihoatra ny 18% ny sokajy fibre crude, sokajy ravina, sns.
2. Ny fahana maintso (2-00-000) dia manondro karazan-tsakafo misy atiny voajanahary mihoatra ny 60%, ao anatin'izany ny kijana, legioma ahitra, rhizome tsy misy starchy, voankazo ary zavamaniry anaty rano. Aza dinihina ny atin'ny proteinina sy ny volo vita amin'ny menaka rehefa avy maina.
3． Silage (3-00-000) Silage vita amin'ny sakafon-javamaniry voajanahary vaovao sy silage miaraka amin'ny habetsaky ny bran na additives hafa, ao anatin'izany ny silage semi-dry miaraka amin'ny atin'ny 45% ka hatramin'ny 55%.
4． Ny famahanana angovo (4-00-000) dia manondro karazan-tsakafo misy fibre crude latsaky ny 18% ary proteinina crude latsaky ny 20% amin'ny zavatra maina, indrindra ny voamadinika, bran ary rhizome starchy voankazo, menaka, voa ahitra sns. .
5． Ny fanampin-tsakafo proteinina (5-00-000) dia manondro ireo famahanana misy fibre crude latsaky ny 18% ary proteinina tsy manara-penitra mihoatra ny 20% amin'ny zavatra maina, indrindra ao anatin'izany ny sakafom-proteinina miorina amin'ny zavamaniry, ny sakafom-proteinina miorina amin'ny biby ary ny sakafom-proteinina ao amin'ny sela tokana Andraso.
6. Ny fihinanan-mineraly (6-00-000) dia misy fividianana mineraly indostrialy na voajanahary voajanahary, sakafom-bahiny afangaro amin'ny mineraly marobe, ary additives mineraly mialoha mifangaro miaraka amin'ny mitondra na diluent.
7. Fahanana vitamina (7-00-000) dia manondro tokana na multivitamin izay namboarina na nodiovina tamin'ny fomba artifisialy, saingy tsy misy fika voajanahary miaraka amin'ny votoatin'ny vitamina avo.
8. Additives (8-00-000) dia manondro karazan-kazo madinidinika tsy mahavelona sy ireo vokatra namolavola azy izay ampiasaina hanatsarana ny vokatry ny sakafo ary mahasoa amin'ny famokarana sy fitahirizana sakafo. Toy ny isan-karazany antibiotika, antioxidants, antifungal agents, adhesives, colorants, enhancers flavour, ary fitsaboana ara-pahasalamana sy metabolisma mifehy ny fanafody.
Na ny fomba fitahirizana sakafo, ny fanodinana ary ny fitehirizana mety dia misy fiatraikany mivantana amin'ny lanja mahavelona ny sakafo. Rehefa avo loatra ny mari-pana amin'ny sakafo dia mety hiharatsy ny proteinina. Raha voatahiry mandritra ny fotoana maharitra ny menaka na voakasiky ny hafanana sy hazavana avo dia hampidirina oksidida ny tavy. Be loatra ny hamandoana na voatahiry ao anaty tontolo mando. Ireo antony ireo dia mitarika ny fahaverezan'ny sakafo mahavelona sy ny fampiasana tsy azo antoka. Raha ampiasaina hamahanana omby dia hisy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny ombivavy be ronono sy ny kalitao sy ny fiarovana ny ronono sy omby. Noho izany, ho an'ny fitahirizana sakafo azo antoka, ireto rohy manaraka ireto dia tokony harahina.
(1) Misafidiana toerana fitahirizana tsara. Ny trano fitehirizan-tsakafo dia tokony ho maina, mangatsiatsiaka, misy rivotra tsara, ary mora esorina, ary manana ny asan'ny fisorohana ny fivoahana, ny fisorohana ny biby mpikiky, ary ny fisorohana ny tany tsy lena. Aorian'ny fanadiovana sy fanadiovana ao amin'ny trano fanatobiana entana dia tokony hosorana rano izy io. Ny fonosana fonosana ho an'ny sakafo dia tokony hofongorana amin'ny setroka avo lenta. Ny tanky, tanky, boaty hazo ary kaontenera hafa dia azo soloina rano amin'ny dichlorvos 100% ary alefa amin'ny fifehezana bibikely. Tsy tokony hifandray amin'ny tany na amin'ny rindrina ny sakafo. Ny birao dia tsy maintsy omanina amin'ny padding.
(2) Mifehy ny mari-pana, ny hamandoana ary ny rivotra Ny hamandoana ao amin'ny efitrano fitahirizana sakafo dia tokony ho latsaky ny 50%, ary tokony hotazomina tsara ny rivotra. Mandritra izany fotoana izany dia tazomy araka izay azo atao ny hafanana ao amin'ny efitrano fitahirizana. Ny karazana fahana isan-karazany dia tokony hapetraka misaraka, miaraka amin'ny elanelana misy eo anelanelan'ny stack sy ny stack mba hahazoana fidirana sy fidirana mora. Ny fanambanin'ny stack dia tsy maintsy atsangana amin'ny torimaso mba hisorohana ny hamandoana sy ny rivotra. Amin'ny vanim-potoana maripana ambony dia tokony hampiasaina amin'ny rivotra mafana ny mpankafy hampihenana ny mari-pana hisorohana bobongolo, metamorphism, ary samoina.
(3) Fehezo ny atin'ny rano amin'ny fahanana sy ny akora ampiasaina ao aminy. Ny hamahan-drano dia be mando ary mora tohidra, manafana, manangona ary mamy. Rehefa mitahiry sakafo dia tokony fehezina ny votoatin'ny hamandoana, latsaky ny 14% any amin'ny faritra avaratra ary latsaky ny 12% amin'ny faritra atsimo.
(4) Famonoana biby mpikiky sy bibikely ara-potoana. Ny totozy dia mila mihinana sakafo 9-11 kg isan-taona, izay handoto ny sakafo sy hanaparitaka aretina koa. Noho izany, ny fampiasana fitaovana, fanafody, sns. bibikely fahana nahita, avy hatrany mifantina ny sakafon'ny bibikely, ny fitsaboana bibikely miaraka amin'ny fanafody famonoana bibikely azo antoka sy mahomby.
(5) Raha hita eo amin'ny sakafom-bokatra na akora mahazatra ny bobongolo dia tokony horaisina ny detoxify eo no ho eo mba hampihena ny fatiantoka. Ny fomba mahazatra dia ny taratra ultraviolet, ny fanafanana ary ny fipoahana. Sarotra ny manala tanteraka ny fofona bobongolo, ary tsy tokony hampiasaina amin'ny famahanana omby fa tokony ariana.
Ny varimbazaha dia manarona isan-karazany, anisan'izany ny vary, varimbazaha, lafarinina, soja, ary voam-bary hafa. Ny voamadinika dia misy vary, varimbazaha, lafarinina, soja, sns, ny ankamaroan'ny voa sy voankazo. Sakafo foto-tsakafo nentim-paharazana ho an'ny olona aziatika maro
Ny serealy, tsy ny voan'ny ahitra fotsiny, no tena marina, mizara ho sokajy telo ao Shina:
① Voamaina: Anisan'izany ny vary (Indica, japonica ary mety vary), varimbazaha (varimbazaha, orza, oats, rai), katsaka, sorghum, millet, millet, vary mavo, buckwheat, sns.
② Glycine tsaramaso: ao anatin'izany ny soja, tsaramaso, voanjo, tsaramaso, tsaramaso mena, tsaramaso voa, sns.
③ Yam: Anisan'izany ny ovy, fantatra ihany koa amin'ny ovy na ovy, ovy, ovy, taro ary mangahazo.
1. Mampiavaka ny fitehirizana voamadinika
Mavesatra kokoa ny vatan'ny tanimbary ary miaro ny voam-bary. Izy ireo dia afaka manohitra ny vokatry ny bibikely bibikely sy ny hafanana ivelany ary ny hamandoana amin'ny lafiny iray. Noho izany, mora kokoa ny mitazona ny vary noho ny voam-bary ankapobeny. Na izany aza, mora mipoitra ny vary ary tsy mahatohitra ny maripana ambony, noho izany dia mila fiheverana manokana.
Ny ankamaroan'ny vary (toy ny indica) dia tsy manana dingana aorian'ny fahamatorana, matotra ara-batana amin'ny fijinjana, ary mahay mitsimoka. Mandritra izany fotoana izany dia ambany ny fandraisana ny rano takiana amin'ny fitsimohany. Noho izany, rehefa mioty ny vary, raha tsy mivatra ara-potoana ny orana sy ny orana dia hitsimoka any an-tsaha sy any an-tsaha ny vary. Ny varika ao anaty fitehirizana dia mora mipoitra koa raha sendra misy ando, hamandoana na orana. Ny famoloana sy ny fahanterana dia tsy tonga ara-potoana, ary na ny ahitra aza mifangaroharo, izay mora mavo. Ny vary mitsimoka sy indica dia mampihena be ny kalitao sy ny fitoniana fitehirizana.
Tsy mahazaka hafanana ambony ny vary, ary mora mihantitra ny vary rehefa fahavaratra. Ireo vary tratry ny masoandro na ny vary sendra ny hatsiaka tampoka taorian'ny masoandro dia mora "vaky".
Fotoana fohy aorian'ny fametrahana ny vary vaovao ao anaty trano fitehirizam-bokatra, raha milatsaka ny mari-pana dia matetika ny ando no hipoitra eo ambonin'ny antontam-bary, izay hampitombo ny hamandoan'ny voam-bary, izay tsy manangona. Ny hamandoan'ny atin'ny voa dia tokony hahena ara-potoana.
2. Ahoana ny fitazonana voa
Mba hiantohana ny kalitaon'ny vary voatahiry: ny vary misy rano betsaka, maloto ary voam-bary tsy lavorary dia mora voan'ny hafanana sy ahitra ary tsy maharitra. Noho izany, ny fanatsarana ny kalitaon'ny vary voatahiry no lakilen'ny fitehirizana vary amin'ny fomba azo antoka. Ny fenitra hamandoana azo antoka ho an'ny vary dia tokony ho faritana arakaraka ny karazany, vanim-potoana, faritra ary toetr'andro. Amin'ny ankapobeny, ny indica vary dia eo ambanin'ny 13%, ary ny japonica vary dia eo ambanin'ny 14%. Ny vitsy ny fahalotoana sy ny tsy fahalavorariana, ny tsara kokoa. Raha misy hamandoana be sy loto maloto ny vary voatahiry dia tokony hapetraka mitokana, maina na maina amin'ny fotoana, ary sieve na safidian'ny rivotra hanala ny loto.
Ny rivotra amin'ny fotoana mety: Noho ny rivotra mahery, ny hafanan'ny voam-bary avo ary ny atin'ny hamandoana vaovao, dia tokony halefa ara-potoana izy io mba hampangatsiaka ny rotsakorana. Raha manokana, rehefa mangatsiaka ny fararano, dia lehibe ny fahasamihafana eo amin'ny atiny sy ny atin'ny antontam-bary. Amin'izao fotoana izao, ny rivotra dia tokony hohamafisina, atambatra amin'ny fihodinana lalina ny velaran'ny voam-bary, hizarana ny hafanana mando amin'ny antontam-bary mba hisorohana ny fikororohana. Raha azo atao dia azo ampiasaina ny rivotra iainana.
Hamehezana ambany mari-pana: ampiasao tanteraka ny toetr'andro mangatsiaka sy maina amin'ny ririnina mba hidiran'ny rivotra, hampihena ny mari-pana amin'ny voa ambanin'ny 10 ℃, ary hampihena ny hamandoana ao anatin'ny fenitry ny fiarovana, ary rakofana sy tombo-kase alohan'ny fiakaran'ny maripana amin'ny lohataona, mba amin'ny fahavaratra soa aman-tsara.
Momba ny mycotoxins
Raha tahiry sy voamaina no voatahiry tsy mety, mycotoxins izay manimba ny olombelona vatana azo inoana fa novokarina. Ny mycotoxins dia miresaka momba ny metabolite misy poizina vokarin'ny bobongolo amin'ny sakafo maloto. Izy ireo dia afaka miditra amin'ny olona sy ny biby amin'ny alàlan'ny sakafo na sakafo, ka miteraka fanapoizinana mahery vaika na maharitra amin'ny olona sy ny biby, ary manimba ny atiny, ny voa, ary ny hozatra, ny sela hematopoietika ary ny hoditra.
Ny mycotoxins dia azo aorina rehefa jinjaina any an-tsaha ny vokatra; ao anatin'ny fepetra fitahirizana tsy mety, ny mycotoxins dia afaka manohy mamorona amin'ny vokatra voajinja. Ny hamandoana avo kokoa amin'ny ankapobeny dia tsara amin'ny fitomboan'ny bobongolo sy ny famokarana mycotoxins amin'ny sakafo. Ny mari-pana dia lafiny iray lehibe hafa koa. Ny zava-maniry eo ambanin'ny maripana sy ny tontolo iainana maina dia mora tohina. Raha avela ny fepetra dia afaka mamokatra mycotoxins ny spore bobongolo.
Ny mycotoxins tafahoatra dia mety manapoizin'ny olona ny mycotoxin.
Ny bobongolo dia karazana holatra, izay mampiavaka ny iray mandroso mycélium ary tsy misy vatana mamoa be. Toy ny holatra hafa, izy io koa dia manana rindrin'ny sela, fomba velona na parasitika na saprophytic. Ny bobongolo sasany dia manova ny sakafo ho lasa poizina misy poizina, ary ny sasany mety mamoaka poizina amin'ny sakafo, izany hoe mycotoxins. Hatramin'ny nahitana aflatoxin, ny fahalotoan'ny sakafo tamin'ny bobongolo sy ny mycotoxins dia nahasarika ny saina hatrany. Izy io dia miteraka fahavoazana lehibe amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​izay miseho indrindra amin'ny fanapoizinana maharitra, fihenan'ny homamiadana, teratogenika ary mutagenika.
Ny fikarohana ny mycotoxins dia iray amin'ireo fomba hiantohana ny fiarovana ny fahana sy ny voamadinika. Miaraka amin'ny fanamafisana hatrany ny fomba detection, dia mihombo hatrany ny kit fitiliana mycotoxin. Eny, ny tantsaha na ny mpiompy dia afaka mamantatra haingana raha toa ka misy mycotoxins ny fahanany sy ny voany.
Ny mycotoxins dia singa iray manohitra ny sakafo mahavelona misy amin'ny sakafo sy akora, ary metabolita faharoa an'ny mycotoxins mahery. Ny mycotoxins dia novokarina nandritra ny fanodinana, ny fitaterana ary ny fitahirizana sakafo. Tokony holazaina fa tsy misy toerana eto amin'izao tontolo izao afa-mandositra ny fahalotoan'ny bobongolo. Ny mycotoxins dia tena manimba ny vatan'olombelona, ​​ary ny fifandraisana mivantana amin'ny mycotoxins dia tokony hialana faran'izay betsaka araka izay azo atao, noho izany dia zava-dehibe indrindra ny fisorohana sy ny fitadiavana ny mycotoxins amin'ny sakafo. Ballya manome karazana kitapo fikarohana haingana ny mycotoxin, ny valim-pitsikilovana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny Vondrona Eropeana, tsy ny fandidiana tsotra ihany, fa ny haingana sy ny marina ihany koa.